नयाँ EU सामान्य डाटा संरक्षण नियमन र यसको प्रभाव ...
नयाँ EU सामान्य डाटा संरक्षण नियमन र डच कानूनको लागि यसको प्रभावहरू
सात महिनामा, युरोपको डाटा संरक्षण नियमहरू दुई दशकहरूमा उनीहरूको सब भन्दा ठूलो परिवर्तन हुनेछ। ती they ० को दशकमा सिर्जना गरिएको हुनाले, हामीले सिर्जना गर्ने, क्याप्चर गर्ने, र भण्डार गर्ने डिजिटल जानकारीको मात्रा एकदम वृद्धि भएको छ।  सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, पुरानो शासन अब उद्देश्यका लागि फिट थिएन र साइबर सुरक्षा ईयूभरिका संगठनहरूका लागि बढ्दो महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको छ। व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत डेटाको सम्मानमा अधिकारहरूको रक्षा गर्न, नयाँ नियमले डाटा संरक्षण निर्देश 90 / / / 1 / ईसी प्रतिस्थापित गर्नेछ: जीडीपीआर। यो नियमन मात्र सबै EU नागरिक डेटा गोपनीयता सुरक्षित गर्न र सशक्त बनाउनको लागि होइन, तर युरोपभर डाटा गोपनीयता कानून मिलान गर्न, र क्षेत्रभरि संगठनहरू डेटा गोपनीयता मा पुग्ने तरिका बदल्नका लागि बनाइएको छ। 
उपयोगिता र डच सामान्य डाटा संरक्षण नियमन कार्यान्वयन ऐन
यद्यपि जीडीपीआर प्रत्यक्ष रूपमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा लागू हुनेछ, जीडीपीआरको केहि पक्षहरू नियमित गर्न राष्ट्रिय कानूनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियममा धेरै खुला अवधारणाहरू र मान्यताहरू समावेश हुन्छन् जुन अभ्यासमा आकार र तीखो बनाउन आवश्यक पर्दछ। नेदरल्याण्ड्समा राष्ट्रिय कानूनको पहिलो मस्यौदामा आवश्यक व्यवस्थापकीय परिवर्तनहरू प्रकाशित भइसकेका छन। यदि डच संसद र त्यस पछि डच सेनेटले यसलाई अपनाउन मतदान गरे भने कार्यान्वयन ऐन लागू हुनेछ। यो विधेयक कहिले र कुन फारममा औपचारिक रूपमा अपनाईने भनेर स्पष्ट छ, किनकि यो संसदमा पठाइएको छैन। हामी धैर्य हुनु आवश्यक छ, मात्र समयले बताउनेछ।
GDPR को कार्यान्वयनले फाइदाका साथै बेफाइदाहरू समेट्छ। सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको खण्डित विनियमहरूको सम्भावित तालमेल बनाउनु हो। अहिले सम्म, व्यवसायहरूले २ different बिभिन्न सदस्य राज्यहरूको डाटा संरक्षणमा नियमहरूको लेखा लिनु पर्‍यो। धेरै सुविधाहरूको बाबजुद, GDPR आलोचना गरिएको छ। जीडीपीआरले प्रावधान समावेश गर्दछ जसले बहु व्याख्याहरूको लागि ठाउँ छोड्दछ। सदस्य राष्ट्रहरू द्वारा भिन्न दृष्टिकोण, संस्कृति र पर्यवेक्षकको प्राथमिकता द्वारा प्रेरित, अकल्पनीय छैन। नतिजाको रूपमा, जीडीपीआरले आफ्नो समन्वय योजना हासिल गर्ने हदसम्म अनिश्चित छ।
GDPR र DDPA बीच भिन्नता
सामान्य डाटा संरक्षण नियमन र डच डाटा संरक्षण ऐन बीच केही भिन्नताहरू छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू यस सेता कागजको चौथो अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ। २ May मे २०१ 25 सम्म, DDPA पूर्ण वा धेरै हदसम्म डच विधायकले रद्द गर्नेछ। नयाँ नियमले प्राकृतिक व्यक्तिको लागि मात्र नभई व्यवसायका लागि पनि महत्वपूर्ण नतिजा ल्याउनेछ। तसर्थ, डच व्यवसायहरूका लागि यी भिन्नता र नतिजाबारे सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। कानून परिवर्तन हुँदैछ भन्ने तथ्यलाई सचेत हुनु, अनुपालनतिर बढ्ने पहिलो चरण हो।
'म कसरी आज्ञाकारी बन्छु?', यो प्रश्न धेरै उद्यमीहरूले आफैलाई सोध्छन्। GDPR अनुपालनको महत्व स्पष्ट छ। नियमको पालना गर्न असफल भएमा अधिकतम जरिवाना गत वर्षको वार्षिक वैश्विक कारोबारको चार प्रतिशत, वा २० करोड युरो, जुन जुनसुकै बढी हो। व्यवसायहरूले एउटा दृष्टिकोण योजना गर्नुपर्दछ, तर प्राय: तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन उनीहरूले के गर्नु पर्ने हो। त्यो कारणले गर्दा, यो सेतो कागजमा व्यावहारिक कदमहरू छन् तपाईंको व्यवसायलाई GDPR अनुपालनको लागि तयार गर्न मद्दत गर्न। जब यो तयारीको कुरा आउँछ, यो भनाइ 'राम्रो शुरुआत छ आधा भयो' निश्चित रूपमा उपयुक्त छ।
यस सेता कागजको पूर्ण संस्करण यो लिंक को माध्यम बाट उपलब्ध छ।
यदि तपाईंसँग यो लेख पढेपछि प्रश्नहरू वा टिप्पणीहरू छन् भने कृपया श्रीमतीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। म्याक्सिम Hodak, वकील मा at- कानून Law & More maxim.hodak@lawandmore.nl वा mr मार्फत। टम मेभिस, वकील-मा-कानून Law & More tom.meevis@lawandmore.nl मार्फत वा कल गर्नुहोस् +31 (०) -0०--40 369० 06०।
 एम। बर्गेस, GDPR ले डेटा सुरक्षा, वायर्ड २०१ change परिवर्तन गर्दछ।
अर्को के तपाईं आफ्नो कम्पनी बेच्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? »
पछिल्लो «क्रिप्टोकरन्सी: क्रान्तिकारी टेक्नोलोजीको EU र डच कानूनी पक्षहरू